ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၏ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LLC
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကုပရုကျွန်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
Million Makers ဆိုက်ပရပ်စ်သည်ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအားဖောက်သည်များအားပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကုန်းတွင်းကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တည်နေရာများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်မှလွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိရိယာများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် CRM Solutions၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် virtual ရုံး၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏ဆိုက်ပရပ်စ် Private Limited အမည်ကိုရှာပါ
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဂရိ - Cypriot စာရေးဆရာ Leonidas Malenis ၏ဖော်ပြချက်အရ“ ပင်လယ်၌အစိမ်းရောင်အရွက်များနှင့်“ ရာသီဥတုနှင့်မီးတောင်များ” ရှိရာတောင်တန်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းများပါရှိသည်။ ၁၀ ရာစုကျော်မှသဘောတူထားသည့်အတိုင်းဥရောပနှင့်အာရှတို့တွင်လူမှုရေး၊ ၎င်း၏အဓိကမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သောနီကိုစီယာ၊ လီမစ်စကော၊ ဖင်မာဂူတာနှင့်ပါဖိုတို့သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ၊ ရှေ့ဆောင်များနှင့်ခရီးသွားသူများ၏သက်ရောက်မှုများကိုမျိုချပြီးလူကြိုက်များပြီးရိုးရာအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည်။
ယနေ့ဆိုက်ပရပ်စ်သည်ဥရောပမှ guests ည့်သည်များအတွက်ထင်ရှားသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ပျားရည်ဆမ်းခရီးများမှလှပသောတိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံမှဆွဲဆောင်သောအတောင်ပံတိရိစ္ဆာန်စောင့်ကြည့်သူများ၊ (Aphrodite ၏အံ့သြဖွယ်ရာနေရာ၊ ရှေးခေတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနတ်ဘုရားမကဲ့သို့))၊ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၇၃ အကွာအဝေးရှိတစ်နေရာရာတွင်ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံသည်စိုက်ပျိုးစီးပွားနှင့်လဲလှယ်မှုအပေါ်မှီခိုသည့်လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီးအစ္စရေး မှလွဲ၍ အိမ်နီးချင်းအများစုထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဘဝလမ်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ဤတိုးတက်မှုကိုကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်နေသောကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများကသိသိသာသာကူညီခဲ့သည်။
လစ်ဘရယ်ငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်သောအကူအညီကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ကပါဝါပြတ်တောက်မှု၊ ဆိပ်ကမ်းအလှည့်အပြောင်းများ၊ တစ် ဦး ချင်းဝေးလံသောတိုင်းပြည်များကဒါ့အပြင်ဆိုက်ပရပ်စ်မှလက်လှမ်းအချို့လမ်းညွှန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤနိုင်ငံများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုတိုက်တွန်းရန်နှင့်အကျိုးအမြတ်ရှိသောလုပ်ငန်းများကိုစတင်ရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုပေးခဲ့သည်။ ဤနယ်မြေများအတွင်းဆိုက်ပရပ်စ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ပြင်ဆင်မှုကိုထောက်ပံ့ငွေနှင့်ဆုများရရှိခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းစုစုပေါင်းအမျိုးသားထုတ်လုပ်မှု (ဂျီဒီပီ) နှင့်တစ် ဦး ချင်းလစာသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးများပြားလာသည်။ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စျေးနှုန်းများသိသိသာသာများပြားလာသည်။
အီးယူတွင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည့် ၁၂.၅% ကော်ပိုရိတ်အကဲဖြတ်မှုနှုန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင်အမြတ်အစွန်း၊ အကာအကွယ်များဖယ်ရှားခြင်းမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များ၊ အရင်းအနှီးထပ်တိုးခြင်း (သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများအောက်တွင်)၊ တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်များအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်အပြည့်အဝရှိသည်။
ထို့အပြင်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုမူဘောင်ရှိပြီး၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကမှရရှိသောလစာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်တွင်တာဝန်ယူမှုရှိသောနှစ်ဆတာ ၀ န်ယူမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်မြောက်မြားစွာအကျိုးတူအဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ၎င်းသည်မြေထဲပင်လယ်နှင့်ဥရောပ၌ခရီးသွား most ည့်အများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေနိုင်သည့်စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောမြေယာလုပ်ငန်းရှိပြီး၎င်း၏ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင်အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးရန်နေရာများစွာရှိသည်။ အလားတူပင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျေးလက်နှင့်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းတံခါးဖွင့်ထားပါသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်သည်ဥရောပတွင်စတင်လုပ်ကိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အဓိကရည်ရွယ်သည်။ ငွေရေးကြေးရေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအလေးချိန်အလွန်များသည့်ပြည်မကြီးတွင်ဆိုက်ပရပ်စ်သည်သဘာဝလေကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသင်စတင်လိုပါကဆိုက်ပရပ်စ်ရှိငွေနှင့်သက်ဆိုင်သောလိုင်စင်သည်စျေးဝယ်သူများအတွက်အထူးလေးနက်သောတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိရေးဖြစ်သည်။ ကုပရုကိုသင်၏ဥရောပအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားအီးယူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဌာနခွဲများသို့မဟုတ်အလုပ်နေရာများတည်ထောင်ရန်မျှော်လင့်သည်။
ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသူအမြောက်အများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံအားစျေးကစားသူများအားဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကြီးကြပ်သူများကိုထောက်ပံ့ရန်အခွန်လျှော့ချခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အကျိုးတူအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့်နေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ဘဏ်များသည်ချေးငွေများကို securitize လုပ်ခြင်းဖြင့် NPL ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ရန်ဘဏ္financialာရေးဥပဒေများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးလူ ဦး ရေနှင့်လုပ်သားအင်အား
၇၀% ကျော်သည်အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ဆက်သွယ်ကြပြီးကျွန်းသည်အခြေချနေထိုင်သည့်ကွန်ယက်ရှိသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ပြည်သူအများစု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာလည်းအဆင့်မြင့်စွမ်းရည်များရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်းတွင်အစွမ်းထက်သောအများပြည်သူပိုင်areaရိယာနှင့်ပထမတန်းစားအထူးကုအဖွဲ့အစည်းများရှိပြီးအရာအားလုံးသည်တန်းတူဖြစ်သည် (စာရင်းကိုင်ခြင်း၊ တရား ၀ င်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တာဝန်ခံစီစဉ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်) သင့်အားဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စတင်အလုပ်လုပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးများနှင့်နိုင်ငံမှကမ်းလှမ်းသောရိုးရှင်းသောဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်မှာဥရောပသမဂ္ဂတွင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်ထူးခြားသောမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးများဖြင့်အဆင့်မြင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိသည်။ ဤအချက်ကဆိုက်ပရပ်စ်အားကမ္ဘာ့မောင်းနှင်မှုမြေယာအကြံပေးတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Knight Frank ၏အစီရင်ခံစာအရကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမအကောင်းဆုံးရွှေ့ပြောင်းမှုရည်မှန်းချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဤအချက်မှာနိုင်ငံသည်အီးယူတွင်ပြင်ပလူသိများသောဒုတိယအများဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီး ၂၀% နီးပါးရှိသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ခြင်းသည်အီးယူနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးစံနမူနာဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံမူများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်တည်ငြိမ်သောတာ ၀ န်ယူမှုတို့ကိုရှာဖွေနေသည့်အခွင့်အလမ်းတွင်ဆိုက်ပရပ်စ်သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏နိုင်ငံသည်သင်၏တာဝန်တင်ဆက်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုတိုးမြှင့်ရန်အကြိမ်များစွာကမ်းလှမ်းသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်သည်သူတို့၏တာ ၀ န်များကိုတိုးတက်စေရန်တရားဝင်နည်းလမ်းရှာဖွေသည့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အခြေခံရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်: ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုပရုကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ပရက်စ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုစတင်ရန်နှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်လက်တွေ့ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ငှားရမ်းခြင်းကိုလည်းကူညီသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၏ virtual နံပါတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးတန်ဖိုးအကဲဖြတ်မှု၊ ကြောင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစသည့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံရှိအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ်ကြိုက် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် virtual နံပါတ်များ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ CRM Solutions၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အလုပ်လုပ်မြို့တော်ငွေကြေး, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Apps ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုဖို့ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဆိုက်ပရပ်စ်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲက ၁ လို့ပြောတာမှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်း။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုက်ပရပ်စ် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုက်ပရပ်စ် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုက်ပရပ်စ်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုက်ပရပ်စ်
ကုန်သည်အကောင့်ဆိုက်ပရပ်စ် / ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာဆိုက်ပရပ်စ်
ဆိုက်ပရပ်စ်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။ ဆိုက်ပရပ်စ်
ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္မဏီအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal ဆိုက်ပရပ်စ်
●ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၁၄၀၀
●ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၁၂၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ဆိုက်ပရပ်တွင်ကုမ္မဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်သင့်အတွက်စံပြအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများလည်းပေးအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်ဆိုက်ပရပ်စ်သို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုလျှင်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ရယူနိုင်သည်။
Private Limited ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Merchant Account
Private Limited ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop နှင့်ဖျံ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၌တည်၏
သင်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်မည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဒါ့အပြင်ဆိုက်ပရပ်စ်မှာရှိတဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ဆိုက်ပရုအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်အဖြစ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ကုပရုမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်လျှင်ကူညီပေးပါမည် ငါတို့မှတစ်ဆင့်ဆိုက်ပရပ်စ်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကဆိုက်ပရပ်စ်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ ဆိုက်ပရပ်စ်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဆိုက်ပရပ်စ် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဆိုက်ပရပ်စ်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြံပေးများနှင့်သင်၏ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံပေးများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုအရေးကြီးစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပရပ်စ်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှု - ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးလျှက်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုပေးသည်။
WE ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်း။
ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိဆိုက်ပရပ်စ်၊ LLC တွင်ရှိသောပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဆိုက်ပရပ်စ် / LLC ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်များအတွက်အသင်းမှစာချွန်လွှာ & ဆောင်းပါးများ။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ဆိုက်ပရပ်စ် / LLC တွင်ဆိုက်ပရပ်စ်၏လက်မှတ်စာအုပ်ဝေမျှပါ။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောဆိုက်ပရပ်စ် / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဆိုက်ပရပ်စ် / LLC တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၏မှတ်ပုံတင်ဘို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါလျှင်, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဆိုက်ပရပ်စ် / LLC အတွက်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဆိုက်ပရပ်စ် / LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ဘို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဆိုက်ပရပ်စ် / LLC ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကခွင့်ပြုပေးဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ခွင့်ပြုချက်, သင်, Million Makers မှာငါတို့လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင့်ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ထီပေါက်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးနှင့်ကုန်စည်ကိုအခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လဲလှယ်, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
သင်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ချထားရန်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့် "၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်နိုင်ငံ ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းချီသောဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သာမကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် Professional CFA တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများ။
ကျနော်တို့ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲ။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့မှဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ | Egkomi ရှိ Corporate Services | နီကိုစီယာရှိ Corporate Services
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်၌ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Egkomi ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | နီကိုစီယာရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ
ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဆိုက်ပရပ်စ်.
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဆိုက်ပရပ်စ်၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးသည်ဝန်ထုပ်ကိုဝန်ပိပြီးကုပရုတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်ဆိုက်ပရက်စ်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုက်ပရပ်စ်၌တည်၏
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဆိုက်ပရပ်စ်.
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်ကနေ။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ဆိုက်ပရပ်စ်၌ရှိသောသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကူညီသည်။
Virtual Number - ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအ ၀ င်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအခြားသော VoIP ဖြေရှင်းမှုများ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည် $ 100 နှင့်အတူစတင်
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုက်ပရပ်စ်, ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်မှအက်ပလီကေးရှင်းများ။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော Software Development | ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မြန်ဆန်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏တိကျသောဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာခြင်း။ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်ရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ပါဝင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု | LLC ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်မှတ်ပုံတင် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်, LTD ၏မှတ်ပုံတင် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ကုပရုတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အခြေစိုက်သော LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဆိုက်ပရပ်စ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ် LLC ပေါင်းစည်းမှု, ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျနော်တို့ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းထောက်ခံပါတယ်, ထိုလည်းရည်ညွှန်းသည်, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်မည်, ပါဝင်မှု , ဆိုက်ပရပ်စ် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ် IBC ပေါင်းစည်းမှု, ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LTD ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းကုပရုတွင် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းလီမိတက်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဆိုက်ပရပ်စ် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရက်လီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရက်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန် LTD ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့သည်။ ကုပရုတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းပေါ်ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ် LLC မှဆိုက်ပရပ်စ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရက် (LLC) ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရက် (LLC) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုလည်းဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်စီးပွားရေးကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်စီးပွားရေးကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Private Limited ကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ရန် IBC ကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LTD ကိုဆိုက်ပရပ်စ်၌မှတ်ပုံတင်ရန် ဆိုက်ပရပ်စ်၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကူညီသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုပရုမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အထောက်အကူများမှာ - Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Egkomi ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Egkomi မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Egkomi မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Egkomi မှကမ်းလှမ်းထားသောကုမ္ပဏီများ၊ နီကိုစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နီကိုစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နီကိုစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Nicosia မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Nicosia မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း | Egkomi တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း နီကိုစီယာတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ Egkomi ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Egkomi ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များရှိမြို့များကိုအောက်ပါအတိုင်းထောက်ခံအားပေးခြင်း။ Egkomi ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Egkomi ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Egkomi ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Egkomi ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နီကိုစီယာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နီကိုစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ နီကိုစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နီကိုစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နီကိုစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့် | Egkomi တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ နီကိုစီယာအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကုပရုတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆိုက်ပရပ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Egkomi ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Egkomi ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Egkomi ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Egkomi ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Egkomi ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နီကိုစီယာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နီကိုစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နီကိုစီယာရှိဝန်ဆောင်မှုများ၊ နီကိုစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Egkomi တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ နီကိုစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Egkomi တွင် Egkomi ၌မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီထည့်ပါ Egkomi တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မည် Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်မည် Nicosia တွင်, Nicosia တွင် setup ကုမ္ပဏီ, Nicosia အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်, Nicosia အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာကုမ္ပဏ်ီကုမ္ပဏီများ ၀ န်ဆောင်မှု Egkomi တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ နီကိုစီယာတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Egkomi ရှိနေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ Egkomi တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Egkomi တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ နီကိုစီယာတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ နီကိုစီယာတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ နီကိုစီယာတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားမှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုဆိုက်ပရပ်စ် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Egkomi | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနီကိုစီယာ
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှုကုပရုကျွန်းတွင်ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းကုန်ကျစရိတ်ကုပရုကုမ္မဏီတည်ထောင်ကုန်ကျစရိတ်ကုမ္မဏီ ဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်, ကုမ္ပဏီဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုန်ကျခဲ့သည်။
ကုန်ကျစရိတ်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Egkomi ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Nikosia ရှိစျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တည်ထောင်နိုင်မည်နည်း။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Egkomi တွင်ထည့်သွင်းပါ Nicosia တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် LLC မှတ်ပုံတင် | ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ရန် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်, LTD မှတ်ပုံတင် ဆိုက်ပရပ်စ်၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် LLC, Incorporate IBC ကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ထည့်သွင်း ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် LTD မှ Incorporate ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် LLC ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီထည့်သွင်း ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Incorporate
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation န်ဆောင်မှုများ | ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှုများ | ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
သင်၏ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီထည့်သွင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များဟုလူသိများသောအရည်အသွေးမြင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းများကြောင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးပေးသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဆိုက်ပရပ်စ်မှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ကုပ္မဏ္ Aff Aff Aff Aff Aff Aff Aff Aff Aff Aff
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီ Incorporation အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာစာရင်းကိုင်များ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်စာရင်းကိုင် | ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းဘို့စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်
နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးအထောက်အပံ့ပေးသည်။ Egkomi ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နီကိုစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုက်ပရပ်စ်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အကယ်၍ သင်သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပါ။ အလားတူ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်လည်း Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Egkomi တွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန် Egkomi တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Egkomi, Nicosia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်, Nicosia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Nicosia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Nicosia တွင် setup ကိုကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်, သို့မဟုတ်, Nicosia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်, Nicosia တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်, Nicosia တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Egkomi တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Nicosia တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
မိုးလေ ၀ သဝန်ဆောင်မှု
အစိုးရ၏ဂိတ်ဝေး Portal (Ariadni)
ဆိုက်ပရပ်စ်၏စီးပွားရေး & စီးပွားရေး
Limassol ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (LCCI)
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန
Woman's International Shipping and Trading Association (WISTA) ဆိုက်ပရပ်စ်
ဆိုက်ရောက်ဆိုက်ပရပ်စ် - ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွား Gu ည့်လမ်းညွှန်များ
ဆိုက်ပရပ်စ် - Net
ဆိုက်ပရပ်စ်အပေါ်တစ် ဦး က Window ကို
ဆိုက်ပရပ်စ်ပွဲများ & ပွဲတော်များ
Paradise Jazz Festival ဆိုက်ပရပ်စ်
InCyprus - ဆိုက်ပရပ်စ်အပတ်စဉ်
ဂါးဒီးယန်း - ဆိုက်ပရပ်စ်
Astrobank လီမိတက် http://www.astrobank.com/
ဘေရွတ် Sal ဘဏ် https://www.bankofbeirut.com/
ဘဏ် sal https://www.bankmed.com.lb/
BLOM ဘဏ် Sal https://www.blombank.com/english/home
ဗဟိုသမဝါယမဘဏ် PLC https://www.ccbank.bg/en/
ဂျော်ဒန်အလီဘဏ် plc https://ahli.com/
လက်ဘနွန်နှင့်ပင်လယ်ကွေ့ဘဏ် SAL http://www.lgbbank.com/
ဂရိအမျိုးသားဘဏ် (ဆိုက်ပရက်) လီမိတက် https://www.nbg.com.cy/
RCB ဘဏ်လီမိတက် https://www.rcbcy.com/
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဆိုက်ပရပ်စ် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ခဲယမ်းတွေ၊ ကြေးစား၊
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းပေါ်မှသို့မဟုတ်သို့သွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လူမည်းများ (သို့) ဆိုက်ပရပ်စ်ဥပဒေအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လူမည်းတွေအတွက်မထောက်ပံ့ပါ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏ်ီကုမ္ပဏီများ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုမ္မဏီများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္မကိုကိုကိုသာပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့ဆိုက်ပရပ်စ်သို့သွားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သို့မဟုတ်သို့သော်၎င်းမှအငြင်းပွားဖွယ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုများအပါအ ၀ င်။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏ်ီပေါင်းထည့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းပေါ်မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုရ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဆိုက်မှဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏ်ီကုမ္ပဏီများ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဆိုက်ပရပ်စ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဆိုက်ပရပ်စ်, ဆိုက်ပရပ်စ် ဘဏ်အကောင့်, ဆိုက်ပရပ်စ် ယုံကြည်မှု ဆိုက်ပရပ်စ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုက်ပရပ်စ်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဆိုက်ပရပ်စ်ဘို့
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-cyprus/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-cyprus/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-cyprus/